Kusimudza Chipfuramabwe, Kutakura zvinhu, Kusimudza Chain - Chenli
Ketani yemagetsi wedziva
Wire Tambo Inodhinda Muchina
Hunhu Kudzora System
Chenli anotenda zvakasimba kuti kusimudzira ndiyo nheyo yakakwana. Isu tinotora musika sekutungamira, nehunyanzvi kunowedzera kukwikwidza mukana, nepo mukana wehunyanzvi wakanangana wakakura wakakura-pamusoro uye wepamusoro-giredhi.Verenga Zvakawanda
Kubata kwedu kushanda kunoita kutiita kwakakura. Chenli anotengesa vakawanda vane tarenda vanhu vane hunyanzvi pakutsvagisa, maneja uye musika. Wese munhu ane kodzero yakakodzera yekusimudzira kugona kwavo. Izvo zvinoverengera bhizinesi rinotsvaga chimwe kana zviviri zvitsva zvigadzirwa gore rega.Verenga Zvakawanda
Chenli akawana ISO9001, CE, GS, CCS, zvitupa, izvo zvisina kujairika muindasitiri imwechete iyoyo. Zvichakadaro yedu PICC inishuwarenzi inokwenenzvera RMB2000000 zvigadzirwa inishuwarenzi gore rega.Verenga Zvakawanda
Chenli Group ine yakakwira mhando yekugadzira tekinoroji uye manejimendi timu, Iyo yazvino gorofa manejimendi dhizaini uye yekugadzira tekinoroji yekugadzirisa maitiro ekugadzirisa maitiro maitiro, yakave yakanyatso kupedzwa shanduko kubva kune kutonga kwekutonga kuenda mukudzivirira kwekudzivirira.
TIRI PASI Pese
Enterprise maneti gumi
Yakawanda Kuchengetedza Yakawanda Kuvimbika Chenli Kutasva
Enterprise service Philosophy
Vatengi vakarurama zvachose
Enterprise maneja pfungwa
Insist kuvandudza, pachako rigging indasitiri yepamusoro manejimendi zvakanakira, hunyanzvi mukana, mhando mukana, nguva dzose kusangana tsika zvinodiwa.
Enterprise maneja chinangwa
Iyo mutungamiri weindasitiri inomhanya maneja manejimendi uye hunyanzvi hwekugadzira zvinhu. Chenli Group inoda kugara ichimira newe, ichaita kuti Chenli brand vatengi vave nehupfumi nekusingaperi.
Super-yakaderera Musoro weMagetsi Chain Hoist
HYDRAULIC KUSVIRA MACHINE CLH1000
Yakakura boka rekambani
Makambani ekunze ekuwanika
Kunyatsogadzirira Kugadzirira, Kubereka Asina Mwero, Kuchengetedza NdiMambo
Chipfuramabwe uye zvigadzirwa
Chenli anosimudza chipfuramabwe izvozvi chave kutungamira bhizinesi muChina. Uye isu tiri kugadzira iyo yakakura-pamwero basa. Chenli ine mutsara wekugadzira wakakwana kubva pazvinhu zvakasviba kusvika kune zvapera zvigadzirwa. Kugadziriswa kwega kwega kune basa rakazvimirira, kugadzira kusimudza, ratchetta, bhanhire remota kubva 0.5T kusvika 3000T. Isu tinokwanisa kupedzisa kurongeka kukuru nekukurumidza.
Chenli ikozvino ine seti yakazara yemagetsi yakakwana ekuedza michina, inova nechokwadi chekuti isu taigona kuvimbisa mhando yekutenderera kupfura, kubva pa 20T kusvika ku3000T, uye kudhonza matinji, kubva pa20T kusvika ku50T.
Kutarisana nenhamo yeMari, yega yega mutengi anoteera mari yepamusoro. Yedu yekuraira huwandu inosimudza ne40% ichienzaniswa neyekupedzisira gore. Tenda musimba remumwe, tenda kuna Chenli.
Kusimudza clamp imhando yechigadzirwa chakanyanya nyore nyore, zvinogona kuita kuti basa rako riitike nyore .Chenli inosimudza clamp iri pasi pechichena ichisimudza clamp fekitari inova ndiyo yekutanga fekitori.Chenli inoverengera nhamba yevashandi vehunyanzvi.Super mhando uye sevhisi inovimbisa vashandi kuti vane zviri nani mamiriro uye kuchengeteka. Chenli anosimudza masampata anohwina mukurumbira wakanaka muPearl River Delta, Yangzi river Delta Region, Northeast Region chikonzero chekukwira kwemitengo yepamusoro.Sezvo akasarudzika anotengesa zvinhu, tinosimudza hukama hwebhizimisi hurefu neShougang Group, Sino-petro.Recla chenli yakanzvera mutsva zvigadzirwa: kusimudza marambi SVC mhando, trolleys, pulleys.We takapa OEM sevhisi yeJapan, Finland nezvimwe.
Chenli anogara achitevera kuchengetedza uye kunaka kwechigadzirwa, uye yeuchidza vashandisi mukushandisa basa teerera kuchengeteka.
Chenli yakakwirira simba macheni, tinokwanisa kuburitsa welded cheni, kusimudza (hoisiting) cheni, mugodhi cheni, mhuka mhuka, simudziro mubhadharo keteni, matairi tirera uye Plastiki yakafukidzwa keteni nezvimwe zvingangodaro mazana matatu marudzi, ayo akashandiswa zvakanyanya muchinangwa chakasiyana sekusimudza, kusimudza , kuburutsa, kurongedza, mine, gadheni etc.
Chenli inogadzira marudzi emaketani, ayo anogadzirwa neakadzika-kabhoni alloy simbi. Ivo vane hunhu kana anti-kukanganisa, yakakwirira kurodha huwandu, ductility, elongation.
Chenli G80chain inosangana neDIN5687, DIN5688, yeGerman standard, ISO3076. Tinogona kugadzirisa pameso zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Hatitsvage huwandu hwakaisvonaka. Isu hatitevedzere huwandu hwemirairo, kutendeseka, nehungwaru kutarisira, hunyanzvi, kunyatso, chikamu chakanyanya kwazvo chekushanda uye mutengo, tichiita musika wedu mukurumbira wakanaka. Ticharamba tichiratidzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuyedza kuve nyanzvi, uye isu tinobata maoko pamwe nevatengi takananga munzira imwechete, kusvika pakubata kukuru.
Kutakura uye kusimudza zvakakwana zvigadzirwa
Mechaniki michina iri pasi pefekisheni itsva yeChenli, Inowana pakati peyakagadzirirwa simbi, Hebei mudunhu. Isu takabatana neinjiniya uyo ane ruzivo rwemakumi emakore sewekupiira kwechiremba. Nhanho nedanho isu tinogadzira michina michina. Kubva pane pendi imwe neimwe kusvika pende tinobata matanho ese zvakatsiga. Chigadzirwa chacho chinoshanda zvakanyanya uye chine mote yemakwikwi mutengo, iyo inounza yakawanda yekuraira. Pagore chairo isu tinogadzira uye tinotengesa makumi masere nemasere makumi mashanu neshanu tambo dzakadhinda tambo. Chenli mechnical machira ekushandisa yakashandiswa kudhipatimendi rakasiyana uye inotumirwa kuMalaysia, Singapore, Iran, India etc.
Kutasva nekusimudza ...
Dzvanya apa kuti uwane mamwe mashoko
Zvigadzirwa zvinopisa - Sitemap Verenga Zvakawanda